Guddoomiyaha Waddani Ee Maraykanka Maxamed Aadan Tarabbi Oo Canbaareeyey Falkii Canynaba Kaga Dhacay Xirsi Xaaji Xasan. | Baligubadlemedia.com
Guddoomiyaha Waddani Ee Maraykanka Maxamed Aadan Tarabbi Oo Canbaareeyey Falkii Canynaba Kaga Dhacay Xirsi Xaaji Xasan.
Arrninta Caynaba ka dhacday aad baan u canbaaraynayaa dadka deegaankuna ma geyaan in loo diido biyo iyo dawo. Deegaanka Saraar waxaa ku dhacday abaar aad u baahsan oo gaajo iyo harraadba isugu jirta. Waxay waayeen gurmadkii xukuumadda waxay waayeen gurmadkii ganacsatada waxay waayeen gurmadkii xisbiga KULMIYE oo aad mooddo inuu korka ka mahersaday. Cuud ma tarin oo cad u ma goyn, calaf ma siinin KULMIYE Degmada Caynaba.
Bal eeg Miisaaniyadda muxuu ugu daray?
Sanduuqa dhaqaalaha Soomaalilaan wax ma ugu jiraan?
Mashruuca GPLG maxaa looga reebay?
Ceelasha Biyaha wax ma ka gaadhsiiyey?
Dhismaha Iskuullada wax ma ka qabtay?
Reer Guuraaga iyo Deegaanka wax mataray?
Gobol ma u hayaa dhammaystiran, mase hadal hayaaba?
Waa maxay waxay codka ku baddalanayaan reer Caynaba?
Alle ha u naxariistee Qaasim oo ahaa muwaadin u dhashay deegaanka markuu is deldelay xataa masuuliyiinta KULMIYE si fiican ugamay hawlgalin. Ceel biyood lagu badbaadiyo deegaanka looma qodin, waxaa la yidhi Coodanle uguura. Coodanle uguura waxa la gu waayey xoolo badan. Dad badan ayaa awoodi waayey inay u safraan deegaannada Hawdka ee biyaha laga qoday.
Madaxweyne Siilaanyo waligii iyo waaqii waddada ka muu degin, indhiisa kumuu arag umanuu quudhin wixii halaag iyo omos qabsaday reer Saraareed. Wasiirrada deegaanka ee Xukuumadda ku jiraa waligood habeen ka badan may seexan, markay yimaaddaanna waxay ku mashquulaan farriinta Muuse Biixi soo faray oo ku qaybiyaan Isha Caynaba.
Guddoomiyaha Gobolku waa masiibo cirkaa kaga timi gobolka oo aan wax alla iyo wuxuu ku jillan yahay jirin. Isku shaandhayn kasta waxa dadka deegaanku ku ducaystaan inuu raacayo mana raaco. Dadka deegaankuna iska hor dhaqaajin waayi Guddoomiyahan fadhiidka ah.
Guddidiyadii gobolka sida TALO IYO TOOSIN intii hore xoogaa carcar ah ayaa iiga muuqday haddase abaartii ayaa saamaysay oo ma tugtug roona.
Waxa cajiiba ah arrinka shiidaal baadhista ee gobolka harraadka iyo gaajadu ku habsatay uu u quudhay wasiirka Macdantu. Xaqiiqdii wuxuu ku beegay maalin biyo loo baahnaa ayuu cagaf, siigo, geedo jaris iyo omos uu la dul tagey dadka deegaanka. Waxaan mar labaad canaabarynayaa dadka bukaan jiifka ah ee loo diidey biyaha iyo dawada.
Caynaba waa degmo taariikhiya oo ku taal bariga Soomaalilaan inta badanna ku jirta suugaanta Soomaalilda kuwaada laysku cariyo ama lagu faano. Caynaba waa degmada labaad ee ugu codka badan Soomaalilaan marka laga yimaaddo Gabiley. Waa adhaxda isku xidha gobollada Sool iyo Togdheer ama Sanaag. Waa xaruntii Guutadii 7aad oo aanay maalin kaliya ku ladin cadawgu waana degmo halgan.
Waddani Caynaba waxaa uga qorshaysan inuu ka dhigo gobol buuxa oo xarun u noqda gobollada bari. Waddani waxaa Caynaba uga qorshaysan inuu sameeyo 7-goobood oo lagu xanaaneeyo xoolaaha nool laguna naaxiyo oo ay maamulayso wasaaradda Xooluhu. Waddani Caynaba waxaa uga qorshaysan inuu Kastamkeeda kor u qaado kana dhigo mid soo xareeya dakhli badan.
Waddani waxaa Caynaba uga qorshaysan inuu ka sameeyo Jaamacad Culuumta deegaanka iyo Beeraha ah lana hirgaliyo labada sanno ee ugu horreeya.
Waddani waxa Caynaba uga qorshaysan la sameeyo jid isku xidhaya Dhanaanno iyo waddada Sanaag. Waridaad iyo Caynaba. Waddani waxaa Caynaba uga qorshaysan inuu ka dhiso laba dugsi oo Boodhin ah loona sameeyo biyo macaan.
Ugu danabaynna waxa laysku xdhi doonaa Caynaba iyo Berbera.
Annagu haddaannu nahay masuuliyiinta deegaanka ee xisbiga Waddani ujeedadayadu waa in aannu wax u qabanno dadkayaga. Ma na noqon adoomo la adeegsado sida kuwa hadda xilaka inoo haya. Waxaannu noqon doonnaa kuwo ka duwan KULMIYE iyo dirkiisa.